Best Cities In Eoropa Fa Hiantsena By Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Best Cities In Eoropa Fa Hiantsena By Train
Best Cities In Eoropa Fa Hiantsena By Train
Train Travel Belzika, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Train Travel The Netherlands, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 20/11/2020)
New traikefa no antony tsara lavitra. Na izany aza, indraindray ny mpizaha tany fahitana-namana tsy afaka hanao labozia ny tsena spree, na dia miavaka. Ny olona izay mitsidika ny lisitry ny mahafantatra izany, ary misy be dia be ny soa ihany tanàn-dehibe any Eoropa izay afaka sanatria ny fandaniana fironana.
Na izany aza, ny manam-bola bebe kokoa sy ny heriny sisa ny fiantsenana, fa hevitra tsara ny dia lavitra levitra fa ny fifadian-kanina. Mahazo ny tsara indrindra tany Eoropa tanàna noho ny miantsena lamasinina manatanteraka roa ireo fepetra. Andeha mba jereo kely ny sasany amin'ireo toerana fiantsenana lehibe sy ny fomba hahazoana any lamasinina:
Miantsena any Amsterdam, Pays-Bas
Amsterdam dia fantatra amin'ny zavatra maro, ary ny fivarotana ny iray tamin'izy ireo. Ny tanàna dia manolotra isan-karazany be dia be ny asa sy ny marika fiantsenana, arakaraka ny fomba lehibe ny teti-bola no. Raha tadiavinao sasany upscale fiantsenana, ny P.C. Hoofstraat no eny an-dalana ho anao. Fa departemanta toeram-pivarotana sy ny fivarotana, afaka namely De Bijenkorf, Magna Plaza na Kalvertoren.
De Negen Straatjes na Streets sivy ihany koa ho an'ny lehibe mpiantsena raha te-hiaina maro samy hafa sy ny fomba fivarotana indray. Afaka hahatratra Amsterdam lamasinina mora foana avy amin'ny ankamaroan'ny tanàna lehibe Eoropa, anisan'izany Paris sy Copenhagen.
Miantsena in Milan, Italy is our Fashion pick for Best Cities in Europe for Shopping
I Milan dia isaina amin'ireo tanàna tsara indrindra any Eropa noho ny fiantsenana noho izy raisina ho renivohitry ny lamaody. Na izany aza, Milan dia tsy hoe fotsiny mikasika ny The Fashion ary avo-eny an-dalana lamaody ao amin'ny faritra Duomo. Maro ireo toerana hafa mba hijery, manomboka amin'ireo magazay be fahatany any amin'ny distrikan'i Brera ka hatrany amin'ireo fitaom-pahafinaretana mahafinaritra any amin'ny faritr'i Navigli. Milan tokoa ny paradisa shopper. Raha toa ianao nanitikitika ny saiko izany, afaka nandeha tany Milan mora foana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby avy any Roma, Venice, ary koa ny tanàna hafa tany Eoropa.
Za-draharaha mpiantsena tia Zurich, indrindra fa ireo izay afaka manao ny tsara indrindra ny lafo indrindra fivarotana. Zurich dia iray amin'ireo tanàna tsara indrindra any Eoropa noho ny miantsena satria mahatsapa hafa noho ny ankamaroan'ny metropolises. Ny Sihlcity fivarotana sy ny tsenambarotra Glatt Tsy ny be toeram-pivarotana lehibe angamba ianao taloha, nefa tsy mety mankatò atero ho toetra antsinjarany traikefa.
Toerana mafampana hafa malaza ahitana ny Bahnhofstrasse, Europaallee, ary ny faritra manodidina Langstrasse, indrindra fa raha te- jereo Swiss ary ny famolavolana an-drenivohitra. Nahazo misy lamasinina Mora avy Berlin, Munich, Vienna, ary tanàna lehibe eropeana hafa.
Geneva ho any Zurich TrainS
Berlin, Alemaina ihany koa amin'ny Best Cities any Eoropa noho ny lisitry ny
Berlin manamarina ny anaram-boninahitra ny iray amin'ireo tanàna tsara indrindra any Eoropa noho ny miantsena sy ny mpaninjara goavana distrika any amin'izay hahitanareo saika na inona na inona. Ho an'ireo amin'ny lalina kokoa paosy, Kurfurstendamm na "Ku'damm" dia tsy maintsy-fitsidihana, fa ireo miaraka amin'ny teti-bola azo antoka fa matahotra ianao mankafy ny diany ny Tauentzienstrase. Amin'ny maha-malaza Eoropa toerana ary ny tanàna lehibe, Berlin dia mora hita ety ivelany amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby avy amin'ny tanàna maro hafa ao Eoropa.
Munich an'i Berlin Lamasinina
Ny iray amin 'ireo zavatra izay tsy manam-paharoa ho Antwerp miantsena-hendry dia ny izao tontolo izao-malaza diamondra distrika. Na izany aza, Antwerp doesn’t lack designer and Vintage toeram-pivarotana, fahagola fivarotana na be olona na be tsena na. Tsy afaka manome traikefa tsy manam-paharoa rehetra mpiantsena, na dia ireo izay sarotra hampifaly. Afaka hahatratra Antwerp lamasinina avy any Berlin, Paris, sy ny tanàna hafa tany Eoropa.
Bruxelles ho Anvers Lamasinina
Amsterdam ho any Anvers Lamasinina
Lille ny Anvers Lamasinina
Paris ho any Anvers Lamasinina
Vonona ho an'ny sasany miantsena lehibe ao sasany amin'ireo tanàna tsara indrindra any Eoropa? Drafitra ny handeha, ary boky ny saran-dalana tany am-boalohany!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-europe-shopping-train%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/in_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / ao amin'ny / de na / ru sy ny maro hafa fiteny.
#traveleurope europetravel fiantsenana fiarandalamby
Enjeho aho raha vitanao, ary raha tsy hitanao aho ao amin'ny Save A Train Blog - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
Nandeha lamasinina, Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe